Written by Calvin	Posted on August 3, 2020 August 3, 2020 Less than 0 min read
Harare – Zimbabwe, a Southern African country bordering South Africa from the South has faced a myriad of problems since gaining its independence in 1980 from Britain and it’s of no wild guess where those problems came from, what they are and their effects on citizens.
Over the years spanning before former president Robert Mugabe was removed from office through a coup de tat, the once known as the breadbasket of Africa has been facing rampant corruption, human rights violations characterized with abductions, tortures, and murders of anyone opposing the government which is made up of the ruling Zanu PF party as well as a failing economy which has led to millions of Zimbabweans fleeing to neighboring countries and as far as Europe.
On the evening of 14 November 2017, elements of the Zimbabwe Defence Forces gathered around Harare, the capital of Zimbabwe, and seized control of the Zimbabwe Broadcasting Corporation and key areas of the city. During the few days that came after this night, Mugabe tendered in his resignation and Mnangagwa who was a fired former Vice President took over as the acting president of the country until next elections which became violent when the ruling party was accused of rigging elections.
Due to a growing frustration from Zimbabweans, Zimbabwe’s military and police are arresting scores of opposition members and activists after authorities thwarted an anti-government protest last week, according to rights groups.
Zimbabwe’s main opposition party, the MDC Alliance which has been labeled as a terrorist Org, says dozens of its officials have been arrested or have gone into hiding. If state agents do not find the person they want to arrest, they often vandalize their homes and harass their relatives, said opposition spokesman Tendai Biti.
The Zimbabwean government has repeatedly blamed sanctions as the sole cause of the problems Zimbabwe has been facing for the past 20+ years but are they?
Previous story :Up Close, (and very personal), with Zimbabwe's Lockdown measures
Next story :Actor and Black Panther star Chadwick Boseman Dies at 43 due to Colon Cancer
Comments to: #ZimbabweanLivesMatter: Why Zimbabwe is seeking attention from the world